သာယာဝတီခရိုင်အတွင်းမှ မြို့နယ်များ……… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သာယာဝတီခရိုင်အတွင်းမှ မြို့နယ်များ………
Posted by unyuntsoe on Aug 29, 2011 in Copy/Paste |7comments
သာယာလှပ ၀တီမှာ ၊
လက်ပံတန်း လို့ စီရီကာ ။
မင်းကလေးမှာ လှလှပ ၊
မိုးကလေး ညိုလို့ဗျ ။
အုတ်ဖိုဆိုတာက အလယ်လောက် ၊
ကြို့ပင်ကလေးက ကောက် ။
ဇီး ကလေးက ကုန်းပေါ်မှာ ၊
ရွှေ နတ်တလင်း အနီးပါ ။
ခရိုင်သာယာ မြို့နယ်များ ၊
ရေတွက်ကြည့်ပါ ရှစ်ခု ဗျား ။ ။
ကဗျာလေးရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့ … ဟိုးအညာကနေ ရန်ကုန်မြို့ကိုသွားတော့…. ဧရာအနောက်ဆိုတဲ့ အမြန်ကားစီးရတာပေါ့ ….
ညနေ မကွေးမြို့ကနေ သုံးနာရီလောက်ထွက်တယ်… ပြည်ကိုရောက်တော့ ည (၁၂)နာရီပေါ့… ပြည်ကိုကျော်လာပြီး လမ်းဘေးဝဲယာမြို့ကလေး
တွေလည်း မေးကာမေးကာနဲ့ ဘယ်ဟာက ပြည်ခရိုင် .. ပြည်ခရိုင်ထဲမှာ ဘယ်နှမြို့ပါတယ်… ဆိုတာလည်း မမှတ်မိ…. သာယာဝတီခရိုင်ဆိုတာ
လည်း ဘယ်နားကစပြီး ဘယ်နှမြို့ ခရိုင်တွင်းမှာရှိတယ်ဆိုတာလည်းမသိတော့ … မမှတ်မိဘူးပေါ့ဗျာ … သာယာဝတီခရိုင်ထဲမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်
လာတော့မှ သာယာဝတီခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ မြို့နယ် (၈) မြို့နယ်ဆိုတာကို သိရတော့တယ်ဗျာ … နောင်ကြာရင်လည်းမေ့သွားမှာစိုးလို့ ကဗျာလေး
ရွှေရည်စိ်ုး (ဇီးကုန်း) has written9post in this Website..
ဦးညွန့်စိုး(ရွှေရည်စိုး) မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်အမှတ် - ၇၆၉၀
View all posts by unyuntsoe →
ကျမ လည်း သာယာဝတီနယ်ကပါ။ ဆရာ့ ကဗျာ လေးဖတ်ရ တော့ လွမ်းမိပါတယ်။ ဇီးကုန်း ပုတီးကုန်းနယ်ဘက် က (ပလို့) ပြောင်းတွေ ငယ်ငယ်တုန်းက စားခဲ့ ဖူးတာ အဝေးကို ရောက်နေပေမဲ့ လွမ်းနေဆဲပါ။ အုတ်ဖိုမြို့ နယ် လူရည်ချွန်ဖြေပြီး ရင် သာယာဝတီ ခရိုင် အတွက် ထပ်ဖြေဖို့ သွားရတဲ့ အခါ ဆရာ အခုပြောတဲ့ (၈) မြို့ နယ် အပြိုင် အနိုင်လုခဲ့ရတာ လေးတွေ ကလည်း မမေ့ နိုင်စရာပါပဲ။ ဆရာ့ ကဗျာ လေး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
သာယာဝတီနယ်ဟာ ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းတဲ့ ခရိုင်တခုပါ။ အရင်က အင်မတန်ခြောက်ကပ်ပြီး စီးပွားလဲသိပ်မဖြစ်လှပါဘူး။ ခုချိန်မှာတော့ လူဦးရေထူထပ်လာသလို အတော်လဲစည်ကားလာတာဝမ်းသာဘွယ်တွေ့ရပါတယ်။ မောင်မိုးညိုတို့ငယ်စဉ်က မိုးညို (ရေကင်း)၊ မင်းလှ (ကညင်ပင်)၊ အုတ်ဖို (ကျွဲတလင်း/အိုးသည်ကုန်း) ဆိုတဲ့အရပ်တွေဟာ နွေကာလအချိန် ကျင်လည်ကျက်စားခဲ့တဲ့နေရာတွေဆိုရင်မမှားပါဘူး။
မောင်မိုးညိုကလောင်အမည် ဆိုတာ.. အဲဒီဒေသအမည်ကနေ..ယူ.. ပညတ်လိုက်သလား..သိချင်မိပါရဲ့..
မနက်ကပဲ.. ဦးမြင့်ဝေ(ကြို့ပင်ကောက်) ရဲ့စာတင်ပေးလိုက်သေးတယ်..။
သာယာဝတီသားတွေများ.. စာတော်တယ်ထင်ပါ့.. ။
တော်တော် အကင်းပါးပါ လားကွယ်။း)
ကျမ အိုးသည်ကုန်းမှာ ၁၉၆၂-၁၉၇၂ ကာလများတုန်းက ကျောင်းနေခဲ့ဖူးတယ်။နွေကာလ မှာ ဘာများလာလုပ်တာပါလိမ့် နော်။
ဆရာရေ ခုလိုကဗျာလေးစာလေးနဲ့ ဆိုတော့ မှတ်ရလွယ်သွားတယ်နော်။နောက်များစာများများရေးတင်ပေးပါနော်။သမီးတို့ ဖတ်ရတာပေါ့
လူရည်ချွန်ဖြေဆိုလို့ သတိရတာလေး က ၁၉၈၆ -၈၇ လောက်မှာ ကစပြီး နတ်တလင်း က သာယာဝတီခရိုင်ကိုပါလိုက် ပြည် ခရိုင်ကိုပါလိုက် ရှင့်။
ခုနှစ် သာယာဝတီခရိုင် သွားဖြေရရင် နောက်နှစ်ကြ ပြည် ခရိုင် ရောက်သွားပြန်ရော . နောက်ကြတော့မှတ်မထားတော့ဘဲ လူကြီးတွေကပြောတဲ့စီပဲ သွားတော့တယ် မှတ်မိသလောက် ပြည်ခရိုင်မှာ အဆုံးသတ်တယ် . ခုများတော့ မှတ်ပုံတင်လုပ်ရင် သာယာဝတီခရိုင် သွားရတယ်ဆိုတော့ သာယာဝတီခရိုင်ထဲပြန်ပါသွားပြန်ပြီဖြစ်မယ် ။